Guddiga Maamulka Maaliyadda oo soo Dhaweeyey Wakiilka cusub ee IMF ee Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Guddiga Maamulka Maaliyadda oo soo Dhaweeyey Wakiilka cusub ee IMF ee Soomaaliya
Guddiga Maamulka Maaliyadda ayaa 15 Janaayo 2017 ku qabtay kulankiisii 20aad ee bilaha ahaa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Kulankaan ayaa guddigu kaga dooday horumarada uu Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ka sameeyey daba galka hantida ku abaaday akoonadii Bangigii Ganacsiga Soomaaliya ku lahayd dibadaha. Guddiga maaliyadu waxay siiyeen ogolaansho uu bangiga Dhexe ku sii wadi karo hawlaha uu ku furayo akoon hoosaad laga dhex furayo mid ka mid ah akoonada horay u jiray ee Bangiga Dhexe si loogu soo wareejiyo hantida ku raagtay Bangiyada Caalamka. Tani waxay fududaynaysaa habka bixinta lacagaha laga helay afar bangi, ayna ku soo wareejin doonaan akoon xisaabeedkaan, waxaa kale oo socda hawlo lagu xaqiijinayo hantida bangiyada kale weli ku harsan.
Guddiga maamulka maaliyadu waxay isla diyaariyeen qoraal qabyo ah oo heshiis is faham ah, una dhexeeya wasaaradda maaliyadda iyo Bangiga Dhexe si ay u wada furaan akoono xisaabeed laga furayo Bangiyada Ganacsiga oo lagu rido canshuuraha, akoonkaas oo uu maamulayo Bangiga Dhexe . Qoraalka heshiiskaan waxaa loo gudbinayaa Xeer ilaaliyaha guud ee wadanka si uu u meel mariyo. Tani waxay horumarinaysaa hufnaanta canshuuraha la qaaday, waxayna kordhinaysa qanacsanaanta canshuur bixiyayaasha, iyadoona kor u qaadaysa hanaanka horumarinta xisaabaadka ganacsiga.